Mila mailo: misy misandoka ho mpitsabo maso - ewa.mg
News - Mila mailo: misy misandoka ho mpitsabo maso
Tokony ho mailo ny rehetra, indrindra any ambanivohitra, fa misy ny olona maso mitety vohitra mitonona ho mpitsabo mandray an-tanana marary ary manome fanafody. Tranga iray niseho tany amin’ny faritra ivelan’ny Renivohitra, nitarika fahasimban’ny mason’ny zaza vao 15 volana, izany. Noho ny fanafody (collyre) nomen’ny olona nisandoka ho mpitsabo maso ny nahatonga izany. Efa mandeha ny fanadihadian’ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fahasalamana amin’izao fotoana izao momba io tranga io. Ireo rehetra mitonona ho fikambanana misehatra amin’ny fahasalaman’ny maso, tsy maintsy manana fifanaraham-piaraha-miasa avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana.Tokony hanana mpitsabo manana fahaizana manokana amin’ny fitsaboana maso koa izy ireo, araka ny fanambaran’ny tomponandraikitra ny minisiteran’ny Fahasalamana. Mialoha ny hanatanerahana ny asa, mila mitondra ireo antontan-taratasy voalaza ireo eny amin’ny tomponandraiktiry ny fahasalamana ao an-toerana ilay fikambanana.
L’article Mila mailo: misy misandoka ho mpitsabo maso a été récupéré chez Newsmada.
Liste électorale : Arrêté définitif le 11 novembre prochain
Suivant l’article 3 du décret n°2020-1112, fixant les modalités d’organisation des élections sénatoriales, la CENI tient à rappeler les parties prenantes aux élections que la liste du collège électoral sera arrêtée définitivement ce mercredi 11 novembre 2020 avant 12 heures. En ce sens, les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts du Conseil d’Etat reçus jusqu’à ce délai seront les seuls à prendre en compte dans l’établissement de la liste du collège électoral (Maires et Conseillers municipaux et communaux). A l’issue de l’arrêté définitif, la CENI procédera à l’impression de ce dernier, qui sera utilisée lors des élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Dans cette optique, aucune modification ne sera plus possible au-delà de la date de l’arrêté définitif. Recueillis par Dominique R. L’article Liste électorale : Arrêté définitif le 11 novembre prochain est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Liste électorale : Arrêté définitif le 11 novembre prochain a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Taratasy misokatra ho an’ny Sadc: tsy mpanongam-panjakana fa ho arofanina ny RMDM
Mbola nampahatsiahy indray. Nasongadin’ny taratasy misokatra nalefan’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia (RMDM) ho an’ny fivorian’ny Sadc tany Tanzania ny fijoroan’izy ireo. “Antom-pijoroanay ny ho arofanina ho an’ny mpitondra ankehitriny fa tsy rafitra entina hanonganam-panjakana akory. Raisinay ho tomponan’andraikitra amin’ireo fampanantenana nataony ka tsy tanteraka sy ireo fanapahan-kevitra noraisiny fa tsy nahomby, na tsy mitondra soa ho an’ny vahoaka ny mpitondra”, hoy ny taratasy. Nanteriny fa atao ao anatin’ny fametrahana ny tena demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna izany. Nampanantena ny hijoro hatrany ho ren’ny vahoaka malagasy ny RMDRM raha toa ka tsy mandeha amin’ny tokony ho izy ny fitantanana ny raharaham-panjakana.Fahasahiranan’ny vahoaka…Notanisain’izy ireo tamin’izany ny fahasahiranan’ny vahoaka manerana ny Nosy. Ny tsy fandriampahalemana, ny fahatapahan’ny jiro tsy misy farany, ny fijalian’ny vahoaka amin’ny famatsiana rano… “Tsy hitsikera fotsiny anefa izahay fa hanao ezaka ihany koa hanentana ny vahoaka eo amin’ny andraikitry ny antoko mpanohitra eto Madagasikara ary hitondra vahaolana araka ny tandrify anay”, hoy ihany izy ireo.Nohitsin’ny taratasin’ny RMDM ho an’ny Sadc koa fa tsy eken’izy ireo ny fanitsakitsahana ny lalàmpanorenana na ny fanaovana ambadika politika amin’ny fanaovan-dalàna ka hampiasana ny Antemierampirenena ho sehatra politika hiarovana ny tombontsoan’ireo mpitondra sy ireo mpiara-dia aminy irery. “Misy indray ny fikasana ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana izao hamerana sy hamatorana ny mpanohitra tsy ho afaka manao ankahalalahana ny asany amin’ny fanovana io lalàna io mbola tsy nampiharina io akory. Midika sahady ho fanamparam-pahefana ka atahorana ny mety hiafara amin’ny didy jadona eto amin’ny firenena”, hoy ihany ny RMDM.Manahy fitondrana jadona… Nomarihin’ny taratasy fa efa fantatry ny vahoaka manontolo fa anisan’ny namolavola ny lalàmpanorenana tamin’ny taona 2010 ary koa namolavola ny lalàna 2011-013 fony izy ireo nitondra ny Tetezamita tamin’izany ny mpitondra ankehitriny. “Tsy mety amin’izy ireo indray ve ny lalàna nataony sa tsy mety aminy ka hitadiavana hevitra ny hanilihana azy ny olona mipetraka ho mpanohitra amin’izao fotoana izao? Atahorana ny hiverenan’ny fomba fitondrana jadona nandritra ny Tetezamita ka nampiasana herim-pamoretana ny vahoaka, tsy mitovy fomba fijery tamin’ireo mpitondra tamin’izany”, hoy izy ireo.Synèse R. L’article Taratasy misokatra ho an’ny Sadc: tsy mpanongam-panjakana fa ho arofanina ny RMDM a été récupéré chez Newsmada.
Misy tranga Coronavirus efatra ao Ihosy: tsy ampy ny tahirim-panafody hitsaboana
Manao antso amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana ny mpiandraikitra ny fahasalamana any amin’ny faritra Ihorombe handefa haingana ny anjara fanafody ho an’ny distrika rehetra ao anatiny hitsaboana ny olona mararin’ny Covid-19. Efatra ny tranga voatily fa mitondra ny tsimokaretina Coronavirus ao anatin’ny distrikan’Ihosy, roa tsaboina ao amin’ny hopitalin’Ihosy fa ny roa kosa, any Fianarantsoa no karakaraina. 81 ny tranga ahina satria nifampikasoka tamin’ireo efatra marary ireo. Tsy ampy ho an’ireo rehetra mihiboka any an-trano ny tahirim-panafody ka voatery hampividy izany ny mpitsabo tomponandraikitra any an-toerana. Manomboka avy hatrany ny fitsaboana ho an’ny tranga mampiahiahy rehetra mitoka-monina nefa ireo marary miditra hopitay ihany no mahazo maimaimpoana fanafody amin’izao fotoana izao. Nandefa tatitra aty amin’ny minisitera foibe ny mpitantana ny fahasalamana sy ny CRCO ka miandry fandraisana andraikitra izy ireo manoloana ny valanaretina.Vonjy L’article Misy tranga Coronavirus efatra ao Ihosy: tsy ampy ny tahirim-panafody hitsaboana a été récupéré chez Newsmada.
RN7 : Fanafihana taxi-brousse, jiolahy iray maty voatifitra
Tandahatra taxi-brousse, mihazo ny lalam-pirenena fahafito iny indray no saika lasibatry ny andian-jiolahy ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy teo, teo amin’ny PK277+600, toerana antsoina hoe Sampanana kariera, ao amin’ny fokontany Ivato Centre, distrikan’Ambositra. Araka ny fampitam-baovoa azo avy amin’ny zandary, tamin’io fotoana io dia nisy nametraka bolongam-bato ny arabe. Voatery nijanona araka izany ireo taxi-brousse maromaro teo anatrehan’izany. Niditra an-tsehatra niaro ireto fiara mpitatitra ireto kosa ireo zandary mpanara-dia, raha ny sasany niezaka nanala ireo vato. Tamin’izay fotoana izay anefa no niantefa tany amin’izy ireo ny tifitra variraraka narahana tora-bato, avy anaty kirihitra rehetra tany. Voatery niaro tena araka izany ireo zandary ary nitifitra ihany koa. Nijanona ny tifitra ary fantatra fa nanao tsoa-pe nandositra ireo jiolahy saika hanakan-dalana. Nizotra nilamina taorian’io ny dian’ireo fiara mpitatitra saika voatafika ireto. Tsy nisy naninona ireo mpandeha ary tsy nisy zavatra lasan’ireo olon-dratsy. Tonga teny an-toerana nanampy ireto namany rahateo ihany koa ny zandary avy Ivato Centre tamin’io fotoana io. Tamin’ny fitsirihana sy ny savahao ny manodidina no nahafantarana fa nisy dahalo iray maty, lavon’ny balan’ny zandary, ary nisy roa hafa naratra ihany kosa saingy afa-nitsoaka. Na dia eo tokoa aza ny paik’ady ataon’ny mpitandro filaminana hisorohana ity fanakanan-dalana eny amin’ny lalam-pirenena dia azo lazaina fa mbola manjaka izany ankehitriny. Saingy ny lafy tsarany fotsiny dia matetika tsy mahatanteraka hatramin’ny farany ny asa ratsy ataony ireo mpanafika. Na izany aza, efa tsy afa-miala amin’ireo mpandeha ny tebitebin-tsaina. m.LL’article RN7 : Fanafihana taxi-brousse, jiolahy iray maty voatifitra a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Andriamena: mikatso ny fanondranana kraoma
Tsy mbola mivaha ny olana. “Efa nisy taratasy avy any amin’ny fitsarana namoaka ny fanomezan-dalana fanokafana indray ny orinasa APC. Olana anefa ny fikatsoan’ny fahafaha-manondrana ny vokatra kraoma any Toamasina, ahafaha-mandefa azy any ivelany”, hoy ny solontenan’ny mponina, Rakotoarivony Minosoa, tetsy Ivandry. Mangataka ny fahafaha-manondrana indray ny kraoma, izy ireo ka nanao antso avo amin’ny filoha sy ny praiminisitra, hamahana izany olana izany.Nanterin’izy ireo fa anisan’ny mitondra fanohanana sosialy ho an’ny mponina ny fahafahan’ny APC, manondrana kraoma. Ahafahana mandoa ny karaman’ireo mpiasa mivelona amin’ity orinasa ity na mivantana na ankolaka koa ny fanondranana. Eo koa ny fanamboaran-dalana… « Iankinan’ny aim- bahoaka izany”, hoy ihany izy ireo. Notsiahivin’izy ireo fa mifanohitra amin’ny vinan’ny filoha, amin’ny fametrahana indostria manerana ny distrika izao fanakatonana orinasa, tsy afaka manondrana ny vokany izao. Efa nandalo ny ambaratonga rehetra rahateo ny fahazoan-dalana rehetra nataon’ny orinasa.Synèse R.L’article Andriamena: mikatso ny fanondranana kraoma a été récupéré chez Newsmada.
Famaranana ny « Volan’ny teny malagasy »: tany Vakinankaratra sy tany Arivonimamo ny Sandratra
Ampoka haisoratra ireo notsidihin’ny Faribolan’ny mpanoratra sy poeta Sandratra, ny faran’ny herinandro teo. Ho famaranana ny Iray volan’ny teny malagasy, niatrika hetsika Alimbetso “An-tsaha finaritra” tany amin’ny distrikan’Arivonimamo ny mpiray faribolana. Notontosaina mandra-maraina tao amin’ny tokotany malalaky ny “Résidence”Arivonimamo izany ny alin’ny zoma 2 jolay hifoha asabotsy 3 jolay 2021. Mpanakanto marolafy ireo nanafana ny afon-dasin’ny Alimbetso tamin’ity. Teo amin’ny sorakanto, ireo poetan’ny Faribolana Sandratra nahitana an’i Tolotra Arinandriana, Ratsifa, i Tsima, i Tsitohery, i Meva, i Mahefa, i Rima, i Zo-Maminirina, i Hery Ny Aina, i Sunny Razakamanana ary Radada no nizara tononkalo sy fanentanana. Teo amin’ny mozika kosa, nisy an’i Ken and Co (Mage 4), i Tonton Pa (Rebika), i José (Tarika Hasina), i Belahy, i Princio ary i Nantenaina Vakamiarina. Ny masoandro miposaka no nisarahana tao Arivonimamo.Tany Antsirabe kosa, vela-kevitra literera tany Mandoto sy tany Ankazomiriotra no namaranana ny Iray volan’ny teny malagasy, ny 2 jolay tontolo andro. Nanasana sy niantsoana ireo mpianatra any an-toerana izany, niarahana amin’ny Faribolana Sandratra sampana Antsirabe, nahitana ny poeta isany, Ra-Phi, i Manampy, i Ni…, notronin’ny mpandrindra nasionalin’ny Faribolana Sandratra, Ranöe. Niompana amin’ny resaka mpanoratra sy haisoratra ny ambioka nafafy nandritra ireo vela-kevitra ireo. Teo koa ny asa soratra sy ny literatiora ka nahaliana ireo mpianatra ary nalai-nisaraka ny rehetra.Nanangona : HaRy RazafindrakotoL’article Famaranana ny « Volan’ny teny malagasy »: tany Vakinankaratra sy tany Arivonimamo ny Sandratra a été récupéré chez Newsmada.